FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA LLEWELLIN SETTER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Llewellin Setter
Lacey the Llewellin Setter amin'ny faha-6 volana— 'Lacey dia mazoto be ary ao amin'ny mihaza . Mandinika bebe kokoa izy androngo , lolo , ary vorona noho ny olombelona na alika hafa . Tena sariaka amin'ny olona i Lacey, tsy misy herisetra mihitsy. Tsara miaraka amin'ny ankizy izy, alika kely , ary saka . Mitady fiheverana izy rehefa mankaleo, fa mahafaly kosa ny mampiala voly. :) '
Ny Llewellin Setter dia alika malemy paika sy tony. Sariaka sy tsara amin'ny ankizy, malemy fomba izy io, ary tia ny fitiavana rehetra azony. Mafana fo sy mavitrika any ivelany, fa somary tsy mihetsika ao anaty trano. Miaraka amin'ireo tompona mpandefitra dia ho lasa fanahy iniana izany. Afaka sarotra vaky trano . Fitsipika , FIRAFITRA SY Training tokony hanomboka aloha mba hisorohana ny fampandrosoana ny fahazaran-dratsy . Mila an'io karazana io manam-pahefana , tony, nefa mafy orina, matoky ary tsy miova tompona, fa tsy tokony hokarakaraina mafy. Mila firafitra be dia be ary mankafy milalao alika hafa. Llewellin Setters dia mpitily fiambenana ampy. Tian'izy ireo ny mandehandeha ary mpitrandraka sy mitsambikina tsara izy ireo. Ny tompon-trano dia tokony ho mafy orina, fa milamina , matoky tena sy tsy miovaova . Anarana serasera olombelona amin'ny canine tena ilaina.
Hahavony: 20 - 26 santimetatra (50 - 66 cm)
Milanja: Lehilahy 45 - 65 pounds (20 - 30 kg) Vehivavy 35 - 50 pounds (15 - 22 kg)
Tsy atolotra ho an'ny trano honenana ary manao tsara indrindra amin'ny tokotany iray farafahakeliny farafahakeliny.
Ny mpikirakira rehetra dia mila maharitra isan'andro, mandeha haingana na ho lasa tsy milamina sy sarotra tantanana izy ireo. Ho fanampin'izany, hankafy ihany koa izy ireo ny mihazakazaka afaka amin'ny fiarovana ny tokotanin'ny fefy. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona.
Ny fikolokoloana sy ny fikosehana tsy tapaka ny palitao malefaka, fisaka sy salasalany no ilaina mba hitazomana azy amin'ny toe-javatra tena tsara. Zava-dehibe ny manamarina ny burrs sy ny tangles, ary ny fitandremana bebe kokoa rehefa milatsaka ny alika. Mandrosoa na shampooo maina raha tsy ilaina. Karakarao amin'ny vodin-tongotra ny volo ary esory ny hoho. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Llewellin Setter dia nesorina English Setter tsipika nataon'ny mpiompy anglisy iray antsoina hoe Llewellin. Ny teny hoe 'setter' dia avy amin'ny fomba isehoan'ny alika saika hipetraka rehefa mahita lalao. Ny talenta an'ny Llewellin Setter dia misy ny mihaza, manara-dia, mamerina, manondro, mpiambina ary mailaka.
Lacey the Llewellin Setter amin'ny 1 1/2 taona— 'Lacey dia mbola zaza mamy mitovy aminy fony izy mbola tanora. Ny fifantohany voalohany dia ny fihazakazahana sy ny fanenjehana arina, vorona ary bibikely. Mifandray tsara amin'ny olona sy ny alika izy fa mety misalasala mahita olona vaovao indraindray. Izy dia alika fianakaviana lehibe ary mifanerasera tsara amin'ireo saka saka onenanay. Faly be aho fa tompon'ny Llewellin Setter tsara tarehy !! '
Lacey the Llewellin Setter amin'ny 1 1/2 taona
Annie the Llewellin Setter — Sary nahazoana alàlana avy tamin'ny tompona Mark sy Bonnie Sherbourne
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Llewellin Setter
Sarin'i Llewellin Setter
tehina corso pitbull Mix toetra
alika emperora sinoa vs shih tzu
rat terrier sy shih tzu mifangaro
alika atomboka amin'ny z